Candy Crush Game - Izeluleko Zokuphila Zamahhala Ziphanga Amacebo - Ukulandwa kwamahhala kweCandy Crush Saga Kusiza Ukukopela
Ulapha: Ikhaya / Ikhaya
Uyikala kanjani impumelelo emhlabeni wanamuhla? Kahle, kuyinto elula umuntu aphumelele uma eqeda imisebenzi eyinkimbinkimbi ngaphandle kokukhathazeka. Uzobhekana nezimo eziningi ezinobunzima. Ngabe uzozinikela nje? Uma wenza kanjalo, lapho-ke awukwazi ukunambitha ubumnandi bempumelelo. Yilapho umdlalo we […]
Izinga elinzima le-Candy Crush liyisibiliboco hhayi wonke umuntu alithandayo. Kepha kulabo abenza kanjalo, siqinisekile ukuthi kunamazinga amaningi lapho bangathola khona le njabulo. Yize kunesimo esibi nesishubile esizungeze lawo mazinga ahambisana nokumemeza nokuhlwaya okungenhloso, ukushaya i-Smartphone nokuyihlola ngokuhamba kwesikhathi […]
Wake wazibuza ukuthi lujule kangakanani ulwandle? Mkhulu kangakanani umthala wethu? Umkhulu kangakanani umkhathi? Amazinga weCandy Crush Saga azoba khona? Ngisho, akufani nokuthi sesidlulisile konke manje; Empeleni, iningi lethu lisala kude ngemuva kwesahluko samanje. Ngasohlangothini oluhle, […]
I-Candy Crush fever ayipheli noma nini maduzane, futhi njengoba abantu beqhubeka nokufinyelela emazingeni aphezulu, intshiseko yabo iyaqhubeka ikhula. Kuyiluphu enonya kodwa ngendlela emnandi. Amazinga anzima ayingxenye yomdlalo, ngakho-ke sisungule lolu cezu ukukunikeza i-Candy Crush Level 1442 Cheats and Izeluleko! Eyodwa […]
Sivame ukukhuluma ngenjabulo kepha uke uzibuze ukuthi isho ukuthini yona ? Kungasho nje ukusula isithiyo osunamathele. Endabeni yokuchoboza uswidi, Injabulo yabasebenzisi kungaba ukusula ileveli ebakhathazayo. Abadlali abaningi bavame ukukhononda, lapho zibambeka ku […]
Ingabe ucasukile ngokubambeka endaweni efanayo lapho wawukhona? Ngabe ubona sengathi impilo yakho ayinayo inhloso uma le njongo ingafinyelelwanga? Yebo, abantu abaningi empilweni banomuzwa ofanayo uma bebhajwe ezingeni elithile emdlalweni. Ngenxa yalokho, ukuthola injabulo ngaphandle kokususa a […]
Kunabantu kulo mhlaba abathanda izinselelo. Bazizwa bengcono kakhulu ukuphuma kubo ezweni eliyinselele. Kufanele basebenze izindlela abangaxazulula ngazo izinga eliyinkimbinkimbi. Noma kunjalo, kwesinye isikhathi abasebenzisi bayabhajwa. Impela, lesi yisikhathi lapho udinga khona umhlahlandlela omncane kusuka noma yikuphi lapho […]
Uke uzizwe impilo yakho ingaphansi kombala? Ngabe sikhona isidingo sokwengeza imibala empilweni yakho? Hhayi-ke uma uzizwa kanjalo kwasekuqaleni kungenzeka ukuthi awukadlali i-candy crush okwamanje. Lona umdlalo wamaswidi anemibala. Ezinye zazo zinemishwe, eminye isongwe kanti eminye kuphela […]
Emhlabeni wanamuhla ophithizelayo, sidinga ukuthola izikhathi kithi uqobo, izikhathi ezenza impilo ikufanele ukuphila, izikhathi ezisisiza ukuthi sihlale siphilile kulokhu kufiphala okumatasa esikubiza ngokuthi impilo. Futhi, kufanele size nokuphunyuka okulula kuwe kusuka ku-Saga ye-Candy Crush Jelly. Mayelana ne-Journey Candy Crush […]
Usangakholelwa ukuthi abanye abantu bahlela imidlalo yevidiyo bebodwa? Ngifana nalokhu ngeqiniso? Ngabe niphila ngekhulu le-19 noma yini? Kungani kungafanele sixhumane nabangane bethu kanti konke kuxhunyiwe emhlabeni wanamuhla? Ngabe sinesikhathi sokuhlala nabo ngaso sonke isikhathi? Akunjalo Empeleni, […]
Igcine ukubuyekezwa ngo July 16, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya Amazwana
Igcine ukubuyekezwa ngo Agasti 10, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya Amazwana